Ukusetyenziswa kweekhamera nezixhobo zokurekhoda - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Izinto eziyimfihlo – isihloko soncedo
Ukusetyenziswa kweekhamera nezixhobo zokurekhoda – inqaku loncedo
Ukusetyenziswa kweekhamera nezixhobo zokurekhoda
Ukuze kuncedwe Ababuki Zindwendwe neendwendwe babe noxolo lwengqondo, izinto ezenza kukhuseleke njengeekhamera nezixhobo zokumamela ingxolo zivumelekile, ukuba nje zichazwe ngokucacileyo kwingcaciso yendlu ibe aziphazamisani nezinto eziyimfihlo zomnye umntu. Imithetho engezixhobo isebenza kuzo zonke iikhamera, izixhobo zokurekhoda, izixhobo ezikrelekrele nezixhobo zokubeka esweni.
Silapha ukuze sikuncede
Izixhobo ezichaziweyo ezibeka esweni kuphela iindawo zikawonke-wonke neendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke: Izixhobo ezenza kubonakale okanye kubekwe esweni kuphela indawo kawonke-wonke (umz. umnyango wangaphambili, okanye indawo yokungena) okanye indawo esetyenziswa ngumntu wonke ephawulwe ngokucacileyo zaza zachazwa kwangaphambi kokuba kubhukishwe zivumelekile. Iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke aziziquki iindawo zokulala okanye amagumbi okuhlambela.
Izixhobo ezifihliweyo nezingachazwanga zokujonga iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke: Nasiphi na isixhobo esibonisa indawo esetyenziswa ngumntu wonke simele sibekwe kwindawo enokubonwa size sichazwe kwinkcazelo yendlu.
Izixhobo ezibekwe okanye ezijonge kwiindawo zabucala: Akukho zixhobo ezimele zijonge kwiindawo zabucala (umz: amagumbi okulala, amagumbi okuhlambela, okanye iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke njengeendawo zokulala, ezifana negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi). Izixhobo ezingakonektwanga zivumelekile logama nje zicinyiwe kwaye zichazwe kwangaphambili kwiindwendwe.
Izixhobo zokurekhoda ezikwindlu yonke, iflethi okanye indlu ekwicomplexi (Kummandla waseTshayina kuphela): Iikhamera nezixhobo zokurekhoda azivumelekanga kwindawo ekuqeshiswa ngendlu yonke okanye eziflethini ngaphandle kokuba zibonakala ngokucacileyo ibe zichaziwe kwiindawo ezihlala nabanye abantu ezibhalwe "indawo yeholide," "inqaba," okanye, " indlu enendawo yokuphola." Funda ngakumbi ngale mithetho Yakwimimandla yaseTshayina.
Ukuba wena okanye omnye umntu niziva nisengozini okanye ningakhuselekanga, nceda uqale unxibelelane namagunya ezomthetho ukuze ucele uncedo. Ukongezelela, ukuba ubona okanye kwenzeka into kuwe engahambisani nepolisi yethu, nceda usixelele.
Nangona ezi zikhokelo zingathethi ngazo zonke iimeko, zenzelwe ukuba zinike ulwalathiso olubanzi ngeepolisi zika-Airbnb zentsapho.
Ukukhusela izinto zakho eziyimfihlo
Ukuze kwenziwe indawo engakhuthazi nje kuphela ukhuseleko lomntu, kodwa nokhuseleko lwenkcazelo yabucala, indlela yokuziphatha ethile neziny…
Iikhamera nezixhobo zokurekhoda kwimimandla yaseTshayina
Funda imithetho yeekhamera nezinye izinto zokurekhoda esebenza ngokukhethekileyo kwimimandla yaseTshayina.